राउटे बस्ती पनि ‘लकडाउन’ ! – Nepali Digital Newspaper
■ प्रकाश अधिकारी, सुर्खेत
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि कर्णाली प्रदेशका राजधानी सुर्खेत सुनसान बनेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज पन्तले पहिलो दिन केही सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि दोस्रो दिन सामान्य अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘अटेर गरेर लकडाउनको अवज्ञा गर्नेलाई पक्राउ गर्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो दिनको भन्दा दोस्रो दिन सहज भयो, लकडाउनबारे सर्वसाधारणले नबुझेर पनि समस्या देखिएको हो ।’ प्रहरीले माइकिङ गर्दै अत्यावश्क कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गर्दै आएको छ ।
‘लकडाउन’ मा अत्यावश्कीय केही पसलबाहेक अरु सबै बन्द छन् । सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, चियापसल खुला राख्न आग्रह गरे पनि वीरेन्द्रनगरमा त्यस्ता अधिकांश पसल बन्द छन् । खुद्रा–खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल पसल बन्द हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी बढ्न सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी आकाशतारा बयकले सुरक्षित भएर अत्यावश्कीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल पसल खुला गर्न व्यवसायीलाई प्रहरी प्रशासनले आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लकडाउनका नाममा प्रहरीले नै त्रास फैलाएमा कालोबजारी झन् मौलाउँछ, यस्तो अवस्थामा सुरक्षित उपाय अपनाएर व्यवसायीलाई सरसामान बिक्री गर्नुस् भनेर आग्रह गर्ने हो ।’
नगरपालिकाले राउटे समुदायमा साबुनपानीले हात धुन सिकाउन स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ । वर्षमा एकपटक मात्रै नुहाउने, खुला दिसा–पिसाब गर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने राउटे समुदायमा सङ्क्रमणको जोखिम हुनसक्ने हुँदा सतर्कता अपनाइएको हो । ‘राउटे समुदाय सङ्क्रमित भएमा अन्य समुदायलाई तत्काल सर्न सक्ने खतरा छ, राउटेहरु खानेकुराको जोहो गर्न, आफूले बनाएका काठका भाँडा बिक्री गर्न गाउँ–शहर पस्ने गर्दछन्’, नगरप्रमुख चन्दले भन्नुभयो, ‘खाद्यान्नका लागि गाउँशहर डुल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नगरले सहयोग गर्दैछ, प्रदेश सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छौँ ।’ फिरन्ते जाति भएकाले राउटेहरु त्रिपालमुनि बस्छन् । शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । अति लोपोन्मुख आदिवासीमा पर्ने यस समुदायको जनसङ्ख्या १५० मात्र छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) बन्द गरेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन केही समयलाई ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । आपतकालीन सेवा भने सञ्चालनमा छ । ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामीको जाँच भइरहेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म त्यस्ता बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था नआएको उहाँले बताउनुभयो । ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्दा बिरामीको भीडभाड बाक्लो हुने हुँदा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको अस्पतालको भनाइ छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाटोमा यात्रु अलपत्र परे हटलाइन नं १११० मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । हटलाइनमा प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रदेश सरकारले यातायातको प्रबन्ध गरी अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्नुका साथै प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षणकै आधारमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने वा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
सार्वजनिक स्थलमा क्लोरिन पाउडर
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुधबार सार्वजनिक स्थलमा क्लोरिन पाउडर छरेको छ । नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखापरेपछि त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सङ्घले क्लोरिन पाउडर छर्ने अभियानको शुरुआत गरेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग दमकल र पानीको सहयोग लिई सार्वजनिकस्थलमा क्लोरिन पाउडर छरिएको बताउनुभयो । यो पाउडरले कोरोनाका किटाणुबाट बच्न सहयोग गर्दछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पर्शुराम खड्काले विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न क्लोरिन पाउडरले मद्दत पुर्‍याउने बताउनुभयो । उक्त पाउडर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, नगरपालिका, बजार क्षेत्रलगायतका सार्वजनिक स्थलमा छरिएको छ ।